21 Jul Published inWorld News Written by M ဘွယ်
Be the first to comment!	ဘရာဇီး သမ္မတဟောင်း လူလာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တရားရုံးက ထိန်းချုပ်ရန် အမိန့်ထုတ်
ဘရာဆီးလီးယား၊ ဇူလိုင် ၂ဝ ဘရာဇီးသမ္မတဟောင်း Luiz Inacio Lula da Silva ကို ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းတစ်ပတ်က လာဘ်စားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဘရားဇီးတရားရုံးက ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်လိုက်ကြောင်း ဇူလိုင် ၂ဝ ရက် AFP သတင်းအရသိရသည်။ ဘရာဇီးသမ္မတဟောင်း လူလာသည် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Odebrecht SA မှလာဘတ်ငွေဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃ သန်းနှင့် ကမ်းခြေရှိဇိမ်ခံအဆင့်မြင့်နေ အိမ်တို့လက်ခံရယူခဲ့သဖြင့် တရားစွဲခံခဲ့ရသည်။ သမ္မတဟောင်း လူလာကို တရားသူကြီး Sergio Moro က ထောင်ဒဏ်ကိုးနှစ်နှင့် ခြောက်လချမှတ်ခဲ့ပြီး သမ္မတဟောင်း လူလာက အယူခံလျှောက်ထားပြီး ၎င်းတွင် အပြစ်မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Read more... 21 Jul Published inWorld News Written by M ဘွယ်
Be the first to comment!	ပြင်သစ် စစ်ဦးစီးချုပ် သမ္မတနှင့် အချင်းများကာ ရာထူးမှနုတ်ထွက်
ပဲရစ်၊ ဇူလိုင် ၂ဝ
ပြင်သစ်စစ်ဦးစီးချုပ် Pierre de Villiers သည် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်လျှော့ချရေးကိစ္စတွင် သမ္မတ မက်ခရွန်နှင့်အချင်းများပြီး ရာထူးမှနုတ်ထွက်သွားကြောင်း ဇူလိုင် ၂ဝ ရက် AFP သတင်းကဆိုသည်။ ယခုနှစ်ဘတ်ဂျက်တွင် ကာကွယ် ရေးအသုံးစရိတ် ယူရိုသန်း ၈၅ဝ လျှော့ချမည့် အစိုးရ၏အစီအစဉ် ကို ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း စစ်ဦးစီးချုပ် Villiers က လွှတ်တော်ကော်မတီ တစ်ခုတွင် ပြောခဲ့သည်။ ထိုအခါ သမ္မတမက်ခရွန်က ''ကျုပ်က ဘော့စ် (boss) ပဲ'' ဟု အခြားစစ်ဗိုလ်ကြီးများ ရှေ့တွင် တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် လူသိရှင်ကြားအချင်းများခဲ့သည့်အတွက်နောင်တရကြောင်း သမ္မတမက်ခရွန်က နောက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားသည်။ Read more... 21 Jul Published inWorld News Written by M ဘွယ်
Be the first to comment!	ထရန့်၏ သားကို ဆီးနိတ် လွှတ်တော်၌ လမည့် သီတင်းပတ်တွင် စစ်ဆေးမည်
ဝါရှင်တန်၊ ဇူလိုင် ၂ဝ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ သားကြီး ဒေါ်နယ်ထရန့် ဂျူနီယာနှင့် ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ် စည်းရုံးရေး မန်နေဂျာပေါလ်မန်နာ တို့ကို ဇူလိုင် ၂၆ ရက်မနက် ၁ဝ နာရီတွင် အမေရိကန်ဆီးနိတ်လွှတ် တော်၌ ရုရှားနှင့် လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်မှု ဖြင့် ဂျူရီအဖွဲ့ကစစ်ဆေးမည်ဟု ဇူလိုင် ၂ဝ ရက် AFP သတင်းကပြောသည်။ Read more... 20 Jul Published inWorld News Written by M ဘွယ်
Be the first to comment!	ထင်ရှားသော မြောက်ကိုရီးယား ပြည်ပြေးတစ်ဦး ပြန်ပေးဆွဲခံရသည်ဟု ယူဆရ
မြောက်ကိုရီးယားမှ ထွက်ပြေးလာသည့် ထင်ရှားသော ရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်သူမှာ ပြုံယမ်းသို့ ပြန်လည်ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရခြင်း ရှိမရှိကို စုံစမ်းစစ်ဆေး နေပြီဟု တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်များက ပြောသည်။ Read more... 20 Jul Published inWorld News Written by M ဘွယ်
Be the first to comment!	ဂျီ-၂ဝ အစည်းအဝေးတွင် ထရန့်နှင့် ပူတင်တို့ ဒုတိယအကြိမ် သီးသန့်တွေ့ဆုံခဲ့
ယခုလအစောပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ သော ဂျီ-၂ဝ အစည်းအဝေးတွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်သည် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်နှင့် ဒုတိယကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က အတည်ပြုထုတ် ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ဆုံမှုကို အစောပိုင်းက ဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ဖြူတော်၏ ကြေညာချက်တွင် သမ္မတနှစ်ဦးသည် ညစာစားပွဲအခမ်း အနားတစ်ခုအပြီး၌ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြထားပြီး မည်သည့်အကြောင်းအရာများအား ဆွေးနွေးခဲ့သည်ကိုတော့ ပြောဆို ခြင်း မရှိပေ။
Read more... StartPrev1234...678910Page 1 of 312	Latest Articles	နန်းဆု စိတ်ထဲမှာ လောလော ဆယ် အချစ်ဇာတ်ကားတွေ သီးသန့် ရိုက်ချင်နေပါတယ်။ သွေးအေးအေး နဲ့သွားတဲ့ဆိုက်ကို ကာရိုက်တာမျိုးကို ရိုက်ကူးချင်နေတယ်။